Qualcomm si ay u bilawdo Lacag Deg Deg ah oo loogu talagalay soo-celinta wireless | Androidsis
Degdeg ah Qiime Qi: Qualcomm lacag-bixinno cusub oo wireless ah
Khadka wireless-ka ayaa ah waxa ugu caansan Android maanta. Waxay ka dhigeysaa adeegsiga Qi lacag-bixinta wireless-ka ah, oo loogu talagalay dhammaan moodooyinka adeegsada maanta. Farqi weyn oo u dhexeeya xukun deg deg ah, halkaas oo summad waliba masuul ka tahay abuuristooda noocyada xamuulka. In kasta oo Qualcomm ay isku diyaarineyso inay soo gasho qaybtaan ka mid ah amarka wireless-ka ee ay ku shubato nidaamkeeda, hadana horay ayey u shaaciyeen.
Shirkadda Qualcomm ayaa ku dhawaaqday Qiimeyn Degdeg ah Qi, nidaam u gaar ah oo loogu adeegsado isticmaalka noocan ah khidmada taleefannada casriga ah ee Android. Tani waa tallaabo uu qaado chipmaker si uu u sameeyo lacag la'aan wireless si aad u dhaqso badan, marka lagu daro raadinta in la sameeyo halbeeg dhexdeeda ah. Marka soo saarayaasha taleefanku waxay heli doonaan marin ay ku buuxiyaan oo u deg deg badan.
Ogeysiiskan ay soo saartay shirkaddu waxaa lagu fuliyay munaasabad ay shirkaddu ka abaabushay MWC 2019. Halkaas ayay kaga wada hadleen mowduucyo kala duwan, sida imaatinka 5G ee taleefannada sare. Maaddaama shirkaddu ay ku dari doonto modemkeeda 'X55' processor-kiisa sare dhammaadka sannadka soo socda. Waxay ku xaqiijiyeen dhacdada lafteeda. Inkasta oo arintani aysan ahayn tan kaliya ee laga wada hadlay. Sababtoo ah Qualcomm ayaa nooga dhigeysa xog ku saabsan lacag-bixintan wireless-ka ah.
Maaddaama shirkaddu ay kordhin doonto Lacagteeda Degdegga ah, lacagteeda degdegga ah, sidoo kale qaybta lacag-bixinta wireless-ka ah. Waxay dooneysaa inay ilaaliso isla mabaadi'da, si ay u hesho lacag degdeg ah, laakiin xaaladdan si bilaa xarig ah. Sidan oo kale, isticmaaleyaasha haysta taleefannada casriga ah ee wata processor Qualcomm Snapdragon ayaa yeelan kara nidaamkan. Fikradda shirkaddu waa inay lahaato nidaam la tijaabiyey oo nidaamsan oo qaybtan ah.
In kasta oo ay tahay wax ay tahay in si tartiib tartiib ah loo gaadho suuqa, sida shirkadda lafteedu ku sheegtay bandhiggan. Laakiin hadda waxaan horey u haysannay shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta taleefanka Android ee adeegsan doonta nidaamkan cusub ee Qualcomm. Xiaomi ayaa noqon doonta sumaddii ugu horreysay ee ku darta, sida shirkaddu ku sheegtay bandhiggan. Mid ka mid ah 20W lacag la'aan wireless, taas oo shaki la’aan noqon doonta mid aad u dhakhso badan, aadna uga dheereysa tan hadda socota. Waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn iyo warqadda daboolka.
Hadda, waxaa jira laba soosaara oo keliya oo leh nooca noocan ah. Waa Samsung iyo Huawei, oo adeegsada nidaamkooda. Labadooduba waxay leeyihiin 20W lacag bixin wireless ah oo laga heli karo taleefannadooda qaarkood. Laakiin fikradda ayaa ah in xamuulka noocan ah lagu ballaarin doono suuqa. Marka Xiaomi waxay noqon doontaa summaddii ugu horreysay ee yeelata nidaamka Qualcomm. Taas oo shaki la’aan u taagan daqiiqad muhiim u ah labada shirkadood.
Shirkadda Qualcomm ayaa si cad u sheegtay waxay rabaan in nidaamkoodu gaaro dhamaan soo saarayaasha Android. Waa fikradda leh Qiimeyntan Degdegga Qi, inay noqon doonto qof walba. In kasta oo hawshani noqon doonin mid aad u dhakhso badan. Sidaa darteed, waxay qaadan doontaa dhowr sano inay ku gaarto qalabka ugu badan suuqa. In kastoo aysan rabin inay bixiyaan taariikho cayiman midkoodna. Maaddaama ay kuxirantahay soo saare kasta ha ahaado ama ha ku daro nidaamkan cusub shirkadda Mareykanka.
Maanta, badankood xeedho wireless in aan helno, waxay siinayaan awood 5W. Tani waa wax wali ka fog 55W in noocyo gaar ah oo lacag-ku-soo-degis ah ay awood u leeyihiin inay bixiyaan. Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo awood hooseeya ayaa wali ah waxa ugu badan ee lagu soo jiito lacag la'aanta wireless-ka maanta. Waxyaabaha ay Qualcomm rabto inay isbedel ku keento nidaamkan cusub. Shaki la'aan, waxay ballanqaadaysaa inay noqonayso horudhac cad oo arrintan la xiriira. In kastoo ay tahay inaan sugno xoogaa illaa ay ka gaadhayso moodooyinka ugu horreeya. Xiaomi wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya, laga yaabee inuu yahay 2020 horeyba. Warar dheeri ah ayaan goor dhow heli doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Degdeg ah Qiime Qi: Qualcomm lacag-bixinno cusub oo wireless ah
Xiaomi waxay lashaqeeyaan Light si ay ugu keenaan kamarado badan mobiladooda